BADDii SOOMAALIYA HALIS AYAY KU JIRTAA! Xil.mahad salad – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA BADDii SOOMAALIYA HALIS AYAY KU JIRTAA! Xil.mahad salad
Xildhibaan mahad salaad oo aad ugu dhaliiley xukumada farmaajo dacwada badan ayaa waxaa uu bartiisa facebooka soo dhigey Qoraalkan
Maxkamada Caalamiga ee (ICJ) ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in dib u dhigista dacwadda badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya ay ku timid kadib markii ay dhagaystay aragtida labada dowladeed ee uusan ahayn go’aan maxkamadu kaligeed gaartay!
Sidoo kale, Safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya Kyle McCarter ayaa wareysi uu siiyay maanta wargeyska ugu afka dheer dalka Kenya ee “The Daily Nation” ku sheegay in safar uu ku tagay magaalada Mogadishu u sheegay Madaxweyne Farmajo in uu isaga haro kiiska maxkamadda, wada hadalna uu la furo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si dacwadda badda loogu xaliyo meel ka baxsan maxkmadda caalamiga ah ee ICJ.
Arintani waxay marqaati fur u tahay warar sheegayay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ogolaaday uuna kala shaqeeyay dowlada Kenya in kiiska badda dib loo dhigo, kadibna wada hadal lala furo dowlada Kenya.
Previous articleHeshiis dhex maray beelo ku dagaallamay Ceel-Berde